Abaklami emhlabeni wonke akasoze ayeka ukuba mangaza imibono original, abaletha njalo fashion show tetsamelilwati takhe wona. Summer isidlulile, futhi yini okufanele uyilindele kithi imfashini inkathi yasekwindla-ebusika 2013-2014? abaklami abadumile baye ethulwa Amaqoqo amasha, ngamunye okuyinto ngabanye. Kodwa zonke zifana ezintathu, okungukuthi, aqukethe izitayela main isizini - lesikhumba, uboya kanye ukuphrinta "ingqamuzana".
Ukuqoqwa Dolce futhi Gabbana -korolevsky isivuno
Fashion endlini Dolce futhi Gabbana "baya kuleli bhange," embethe onobuhle endaweni izingubo bobukhosi bangempela: izigqoko njengoba imiqhele sokunethezeka, izingubo Chic kanye izicathulo, ubucwebe amatshe okuxekethile. Namacici and elengayo ngesimo omkhulu iziphambano eziyigugu, engeza isithombe bemibuso. Sigqoka ne yezicathulo ukuthi bamele ubuso abangcwele, babé unhlangothi nesibindi esikhulu kule neqoqo. Fashion show by Dolce futhi Gabbana - eyodwa ngaphezulu ubufakazi ukuhlonishwa ubuhle besifazane.
Iqoqo ngu Gucci - ubuhle olukhuni
Collection Fall-Winter kusukela Gucci senziwa kwezamabhizinisi isitayela. Kusekelwe ukuncishiselwa esiqinile, Imigqa ehlanzekile obuphelele nenhle futhi ukuthungwa monophonic. Fashion show by Gucci ephula umqondo ukudana onokuqundeka ngendlela esemthethweni, ukunikela ngokwanele ezinemibala egqamile: okuluhlaza okwesibhakabhaka, i-azure, fuchsia, onsomi te. Isudi wenza ngokuphelele isikhumba elincanyana, ukugcizelela kuphela isibindi nokuzimisela nemvelo. Coat nge entanyeni yezingubo Astrakhan, kepha efaniswe imodeli wesilisa, kuyoba efanele e kwekilasi labesifazane.
Iqoqo ngu Prada - umkhuba ngemodeli ngayinye
Fashion House Prada ethulwa iqoqo nge touch of mkhuba Retro. Obumavukuvuku futhi raincoats umugqa sabasincane trapezoid Silhouettes, midi isiketi "polusolntse" futhi quin, izikhwama a "intsha Granny sika" la - konke lokhu Liyindawo ezibalulekile. Libhekene yokuthi fashion ukukhombisa Akumangalisi elikhanyayo, cishe njalo isithombe iqukethe izingxenye eyodwa noma ngaphezulu ehlobene Amathrendi kwesizini. Kungaba emikhonweni lesikhumba jacket ukusikiwa nge noboya elingenamikhono yezinyoni noma ingubo yesikhumba. Kuyaphawuleka ukuthi umbala obomvu usukela cishe kuwo wonke isethi, ngabe kungcono izingubo noma izesekeli. Hhayi ezingadumile kakhulu umbala oluluhlaza noma aqua.
Ukuqoqwa Tom Ford - iziqhumane mikhondo
Tom Ford ethulwa iqoqo, "ukushaya up" yesikhulumi inhlanganisela ezingalindelekile onobuhle imibala, izitayela kanye indlela yokwenza. I ajwayelekile amazwi athi "inhlanganisela incongruous" okukhulunywa ngaso onobuhle ethulwa kuzo ngokugcwele. Jacket-webhomu futhi isiketi emincane eseceleni iwukuthi obucayi ehlobo ibhulukwe nge short noboya jacket, coat ne ezimibalabala futhi isilwane Umdwebo ukuphrinta ibhulukwe kuseli Futuristic - ibeke futhi sekuwumkhuba. Ngokuvamile, fashion show by Tom Ford ethulwa izithombe ethusayo, kodwa uyasebenza ekuphileni kwansuku zonke.
Iqoqo kusukela Trussardi - mesmerizing banganhlanhlatsi
fashion house Trussardi kule sizini wanika bakhethe obugagu, obonakaliswe ukungabi amafomu esiqinile nemininingwane esidonsa amehlo. Ukugcizelela ku izithombe kuyinto lesikhumba phezulu elingenamikhono noma isiphongo, ingubo yezinyoni ezinkulu noma ibhantshi kanye nephethini ingwe. Hit isizini - omhlophe. Naphezu kweqiniso lokuthi ekwindla Russian akudingeki, ngigqoke ezinemibala egqamile, nakuba ibhulukwe elimhlophe, amajazi ngisho izicathulo - esivuna.
Eqinisweni obungenakuphikwa bokuthi omunye izihloko fashion zomhlaba ubhekwa Milan. I fashion show isivele inkathi yasekwindla-ebusika 2013-214 kuleli dolobha usuyiholidi real ochwepheshe nabalandeli abavamile fashion umkhakha.
Imbali Plum - magic of ekupheleleni!
Orchid Ukunakekelwa ekhaya
Ukuqagela ngosuku olulandelayo. Kungenzeka yini ukwazi ikusasa lakhe?
Kuyini umbhunu yomgogodla nalapho kangcono ukwelapha lesi sifo?